Sida loo Cancel Account Clickfunnels - Funnel Of The Day
Sida loo Cancel Account Clickfunnels
laga yaabaa Haddii aadan ku qanacsanaa aad adeegga Clickfunnel ee aad la yaabban sida si aad u joojiso account Clickfunnels.
Iyadoo jawaabta waxaa laga yaabaa in ay adag tahay tan iyo ikhtiyaarka ugu fiican u qarsoon, kaliya waxaad u baahan tahay in ay qaataan labo ka mid ah tallaabooyinka.
First, waa in aad si aad xisaabta menu biilasha oo ku yaalla under tab account ee tago Clickfunnels ka dib feature xafiiska.
Marka aad gaadhay screen this aad maamuli kartaa fursadaha kala duwan ee qorshaha si aad u hoos faa'iidooyinka ku bixiyey in xisaabta aasaasiga ah ama si fudud u masixi.
Waxaan ku talinaynaa in kastoo dhanka ah in, waxaa jira ah "Account On-Qabasho"Feature in la isticmaali karaa haddii aad rabto in aad dib u eegaan adeega ka dib iyada oo aan laga badiyay aad ah Mudanayaasha.
Sidaas, heli Carruur ah, qaadan shaqeeyo off iyo hubi in aad ma seegi this gaar ah dalab hal mar.